နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Connecting to Networks
ယနေ့ ခေတ် intranet များသည် private IP addressing ကို အသုံးပြုကြတယ်။ private IP addresses သည် public Internet မှာ routable မဖြစ်ပါ။ ဒါကြောင့် private IP addressing အသုံးပြုထားတဲ့ hosts တွေ Internet မှာ communicate လုပ်နိူင်ဖို့Network Address Translation (NAT) server လိုအပ်ပါတယ်။ NAT သည် private IP addresses တွေကို public IP addresses တွေအဖြစ် translate လုပ်ပြီး traffic တွေကို Internet သို့forward လုပ်ပေးတယ်။
ဒီ သင်ခန်းစာမှာ Windows Server 2008 computer ကို NAT server အဖြစ် ဘယ်လို configure လုပ်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပါမယ်။
computer အသီးသီးမှာ တိကျတဲ့ public IP address တစ်ခုစီ ရှိနေဖို့Internet ကို design လုပ်ထားပါတယ်။ မကြာမှီ နှစ်များအတွင်း Internet သည် အဆမတန် ကြီးမာကျယ်ပြန့် လာပါတယ်။ ရလဒ်အနေ လုံလောက်တဲ့ public IP addresses တွေ မရရှိနိူင်တော့တာပါပဲ။
NOTE Ipv6 and NAT
larger address space နဲ့improved private addressing design ကြောင့် Ipv6 မှာ NAT မလိုအပ်ပါ။ ဒီသင်ခန်းစာသည် Ipv4 နဲ့ သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
IP address မလုံလောက်တာကြောင့် Internet Service Providers (ISPs) များသည် organization အသီးသီးကို Internet connection အတွတ် public IP addresses အရေအတွတ် အနည်းငယ်စီ assign လုပ်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ computer 1000 ရှိတဲ့ organization တစ်ခုအတွတ် ISP ထံမှ Internet connection ၀ယ်ယူတဲ့အခါ ISP သည် ၄င်း organization အတွတ် public IP addresses4ခု သာသတ်မှတ်ပေးတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် organization ရဲ့ computer အလုံး 1000 သည် public IP address ကို ခွဲဝေအသုံးပြုရတော့မယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။
NAT သည် internal network အတွင်းမှ တစ်ရာ ၊ တစ်ထောင်မက ရှိနေတဲ့ hosts တွေအတွတ် public IP address တစ်ခုရှိတဲ့ computer တစ်လုံး ( သို့ မဟုတ် router တစ်ခု ) ကို အသုံးပြုပြီး Internet access ထောက်ပံ့ပေးတာ ဖြစ်တယ်။ internal network အတွင်းမှ hosts တွေမှာ RFC 1918 အရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အောက်ပါ address ranges များအတွင်းက private IP addresses တွေ ရှိနေရပါမယ်။
Windows Server 2008 ကို NAT server အဖြစ် အသုံးပြုနိူင်သော်လည်း organizations တွေသည် NAT အတွတ် သီးသန့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ hardware device ကိုသာ ရွေးချယ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ routers အများစုမှာ NAT capabilities သည် built-in အဖြစ် ပါရှိတာကြောင့် NAT configure လုပ်ဖို့ နောက်ထပ် hardware သီးသန့်မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ အကယ်၍ NAT server သာ offline ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် clients အားလုံး public Internet ကို access မလုပ်နိူင်တော့ပါ။ ဒါကြောင့် NAT server အမြဲ uptime ဖြစ်နေဖို့အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့hardware နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် server သည် downtime ဖြစ်နိူင်ဖို့အလားအလာ ပိုများပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် server မှာ updates တွေ install လုပ်ပြီးရင် restart လုပ်ဖို့လိုအပ်တာ၊ hardware အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု failure ဖြစ်နိူင်တာ၊ software failures ဖြစ်နိူင်တာ စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Windows Server 2008 မှာ NAT services2ခု ပါဝင်ပါတယ်။
home နဲ့small offices တွေအတွတ် အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ mouse click အနည်းငယ်နဲ့ICS configuration ကို ဆောင်ရွက်နိူင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် configuration options များမှာ အကန့် အသတ်တွေ အရမ်း များပါတယ်။
- Routing And Remote Access Services
multiple subnets များစွာ ပါဝင်တဲ့ routed intranet ရှိနေတဲ့ organizations များအတွတ် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ICS computer ရဲ့ external network interface မှာ public IP address တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ internal network interface မှာ IP address 192.168.0.1 အမြဲ ရှိနေပါတယ်။ ICS ကို auto enable လုပ်ထားရင် DHCP service လည်း auto enable ဖြစ်နေမယ်။ ICS ရဲ့ DHCP service သည် clients တွေကို 192.168.0.0/24 addresses range အတွင်းမှာ assign လုပ်လိမ့်မယ်။ ICS ရဲ့ DHCP service သည် Routing and Remote Access ရဲ့ DHCP Server role or DHCP relay agent feature နဲ့မတူညီပါ။
NAT ရဲ့ ICS ကို configure လုပ်ဖို့ 
1. NAT server မှာ interfaces2ခု တပ်ဆင်ပြီး configure လုပ်ပါ။
- public IP address နဲ့Internet ကို ချိတ်ဆက်ဖို့interface တစ်ခု
- static private IP address နဲ့private intranet ကို ချိတ်ဆက်ဖို့interface တစ်ခု
2. ယခင်က Routing And Remote Access ကို enable လုပ်ထားရင် disable လုပ်ပါ။
3. Start, right-click Network, chose Properties
Network And Sharing Center ပေါ်လာမယ်။
4. Tasks အောက်မှ Manage Network Connections ကို click ပါ။
5. Internet ကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ network interface ကို right-click ၊ Properties ကို click ပါ။
6. Sharing tab မှ Allow Other Network Users To Connect Through This Computer`s Internet Connection check box မှာ check ပါ။
7. သင့်ရဲ့ intranet မှာ ရှိနေတဲ့ private IP addresses များသာရှိတဲ့ Web နဲ့ e-mail server ကို Internet မှ အခြား user တွေ access လုပ်နိူင်စေချင်ရင် Settings botton ကို click ပါ။ internal service အသီးသီးအတွတ် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
- Services list မှာ service ရှိနေရင် ၄င်းရဲ့ check box ကို select လုပ်ပါ။ Service Settings dialog box မှာ server ရဲ့ internal name or IP address ကို ရိုက်ထည့်ပြီး OK ကို click ပါ။
- list ထဲမှာ service မရှိရင် ဒါမှမဟုတ် ၄င်း service သည် non-standard port number ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုရင် ၊ Add ကို click ပါ။ description နဲ့server ရဲ့ internal name or IP address ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ External Port Number For This Service နဲ့Internal Port Number For This Service box များမှာ server အသုံးပြုတဲ့ port number တွေ ရိုက်ထည့်ပါ။ TCP or UDP ကို select လုပ်ပါ။ OK ကို click ပါ။
8. OK ကို click ပါ။
ICS ကို enabling လုပ်ခြင်းသည် Internet network interface ရဲ့ configuration ကို မပြောင်းလဲစေပါ။ ၄င်းသည် internal network interface ကို IP address 192.168.0.1 နဲ့assign လုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ICS computer သည် intrenet interface မှ DHCP requests များကိုသာ response လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ clients များကို IP address range 192.168.0.0/24 အတွင်း assign လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ clients အားလုံးမှာ default gateway နဲ့preferred DNS server address အဖြစ် 192.168.0.1 ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
VPN or dial-up connection ကိုလည်း share လုပ်နိူင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ computer တစ်လုံးသည် remote network ကို connect လုပ်နိူင်သလို၊ intranet မှာရှိနေတဲ့ အခြား computers များမှ traffic များကို forward လုပ်ပေးနိူင်ပါတယ်။
remote access connection တစ်ခုအတွတ် ICS ကို အောက်ပါအတိုင်း enable လုပ်နိူင်တယ်။
1. Start, right-click Network, Properties
2. Network And Sharing Center မှာ Manage Network Connections ကို click ပါ။
3. Network Connections window မှာ remote access connection ကို right-click ပြီး Properties ကို ရွေးပါ။
4. Sharing tab မှ Allow Other Network Users To Connect Through This Computer`s Internet Connection check box ကို select လုပ်ပါ။
5. အခြား ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုအဖြစ် Establish A dial-Up Connection Whenever A Computer On My Network Attemps To Access The Internet check box ကို select လုပ်နိူင်ပါတယ်။ ၄င်းသည် remote network တစ်ခုသို့ forward လုပ်ရမယ့် traffic တစ်ခုခု ကို intranet မှာ ရှိနေတဲ့ computer တစ်လုံးက send လုပ်တဲ့အခါ remote access connection ကို auto establish လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
6. နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုအဖြစ် internal services တွေကို remote network မှတဆင့် access လုပ်နိူင်ဖို့Settings button ကို click ပြီး configure လုပ်နိူင်ပါတယ်။
7. OK ကို click ပါ။
Configuring Network Address Translation Using Routing And Remote Access
Routing And Remote Access ကို အသုံးပြုပြီး full-featured NAT capabilities ကို enable လုပ်နိူင်တယ်။ ICS အစား Routing And Remote Access ကို အောက်ပါ အချက်များကြောင့် အသုံးပြုတယ်။
- internal network အတွတ် 192.168.0.0/24 အစား အခြား addresses တွေကို အသုံးပြုနိူင်တယ်။
- internal networks များအတွင်း route လုပ်နိူင်တယ်။
- Windows Server 2008 ရဲ့ built-in DHCP Server role အပါအ၀င် အခြား DHCP server များကို အသုံးပြုနိူင်တယ်။
- DHCP relay agent အပါအ၀င် Routing And Remote Access component တစ်ခုခု အသုံးပြုထားတဲ့ computer မှာ ICS ကို enable မလုပ်နိူင်ဘူး။ ( RRAS နဲ့ICS အတူတွဲသုံးလို့ မရ )
Windows Server 2008 မှာ Routing And Remote Access ကို အသုံးပြုပြီး NAT ကို အောက်ပါအတိုင်း configure လုပ်နိူင်တယ်။
1. NAT server ကို Interface2ခု တပ်ဆင်ပါ။
- public IP address နဲ့Internet ကို ချိတ်ဆက်ဖို့interface တစ်ခု။
- static, private IP address နဲ့private intranet ကို ချိတ်ဆက်ဖို့interface တစ်ခု။
2. Server Manager မှ Role object ကို ရွေးပါ။ Add Roles ကို click ပါ။ Network Policy And Access Service role ကို add ပါ။
3. Server Manager မှ Roles\_Network Policy And Access Services\_Routing And Remote Access ကို right-click ပြီး Configure And Enable Routing And Remote Access ကို ရွေးချယ်ပါ။
4. Welcome To The Routing And Remote Access Setup Wizard page မှာ Next ကို click ပါ။
5. Configuration page မှာ Network Address Translation (NAT) ကို select လုပ်ပြီး Next ကို click ပါ။
6. NAT Internet Connection page မှာ server ကို Internet မှာ ချိတ်ဆက်မယ့် interface ကို select ပြီး Next ကို click ပါ။
7. Completing The Routing And Remote Access Server Setup Wizard page မှာ Finish ကို click ပါ။
server သည် internal network မှ packets တွေကို Internet သို့forward လုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
NAT ကို enable လုပ်တဲ့အခါ မည်သည့် DHCP server ကိုမဆို အသုံးပြုနိူင်တယ်။ Windows Server 2008 computer ကို DHCP server အဖြစ် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Chapter မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း DHCP Server role ကို add လုပ်ခြင်းဖြင့် full-featured DHCP server ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NAT မှာ (အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ၊ ဒါပေမယ့် အကန့် အသတ် အရမ်းများတဲ့) single subnet မှ DHCP clients တွေကို IP address တွေ provide လုပ်ပေးနိူင်တဲ့ DHCP server ပါဝင်ပါတယ်။ NAT DHCP ကို configure လုပ်ဖို့အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
1. Server Manager မှ Roles\_Network Policy And Access Services\_Routing And Remote Access\_Ipv4\_NAT မှာ right-click ပြီး Properties ကို ရွေးချယ်ပါ။
2. Address Assignment tab မှ Automatically Assign IP Address By Using The DHCP Allocator check box မှာ select လုပ်ပါ။
3. Private network address နဲ့subnet mask ကို type လုပ်ပါ။
4. ရှိနေတဲ့ servers များမှာ (NAT server ရဲ့ private IP address) statically assign လုပ်ထားတဲ့ specific addresses တွေကို ချန်လှပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် Exclude button ကို click ပြီး Exclude Reserved Addresses dialog box မှာ DHCP clients တွေမှာ assign မလုပ်ရမယ့် addresses တွေကို list လုပ်ပါ။ OK ကို click ပါ။
5. ဖွင့်ထားတဲ့ dialog boxes တွေကို ပိတ်ဖို့OK ကို2ကြိမ် click ပါ။
DHCP server နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ statistics တွေကို ကြည့်နိူင်ဖို့ အတွတ် Roles\_Network Policy And Access Services\_Routing And Remote Access\_Ipv4\_NAT node မှာ right-click ပြီး Show DHCP Allocator Information ကို choose လုပ်ပါ။
Enabling Forwarding of DNS Requests
Internet ကို ချိတ်ဆက်ဖို့NAT clients များသည် DNS requests များကို resolve လုပ်နိူင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၄င်းအတွတ် DNS Server role ကို အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းနိူင်ပါတယ်။
DNS server မလိုအပ်တဲ့ small networks များအတွတ် NAT server ပေါ်မှာ configure လုပ်ထားတဲ့ DNS server သို့DNS requests တွေ forward လုပ်ဖို့NAT ကို configure လုပ်နိူင်ပါတယ်။ အစဉ်အလာအရ ပြောရရင် ၄င်း DNS server သည် သင့်ရဲ့ ISP ထံမှာရှိနေပါတယ်။
DNS requests တွေ forward လုပ်ဖို့အောက်ပါအတိုင်း configure လုပ်နိူင်ပါတယ်။
1. Server Manager မှ Roles\_Network Policy And Access Services\_Routing And Remote Access\_Ipv4|NAT မှာ right-click ပြီး Properties ကို ရွေးပါ။
2. Name Resolution tab မှာ Clients Using Domain Name System (DNS) check box ကို select လုပ်ပါ။
3. Network access အတွတ် NAT server သည် VPN or dial-up connection ကို connect လုပ်ရတယ်ဆိုရင် Connect To The Public Network When A Name Needs To Be Resolved check box ကို select ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ demand-dial interface ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
4. Ok ကို click ပါ။
DNS server အတွတ် statistics တွေကို ကြည့်ရှုနိူင်ဖို့Roles\_Network Policy And Access Services\_Routing And Remote Access\_Ipv4\_NAT node မှာ right-click ပြီး Show DNS Proxy Information ကို ရွေးချယ်ပါ။
client computers တွေကို configure လုပ်ဖို့ 
- NAT server ရဲ့ intranet interface နဲ့LAN တစ်ခုထဲမှာ ရှိနေတဲ့ computers တွေအတွတ် NAT server ရဲ့ intranet IP address ကို default gateway အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါ။
- အခြား intranet LANs များအတွတ်၊ Internet သို့ ဦးတည်တဲ့ traffic တွေကို forward လုပ်ဖို့routers တွေမှာ NAT server ရဲ့ intranet IP address ကို configure လုပ်ပေးပါ။
- clients အားလုံး Internet DNS names တွေကို resolve လုပ်နိူင်ကြောင်း သေချာပါစေ။ NAT server ကို DNS server အဖြစ်လည်း မကြာခဏဆိုသလို configure လုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတော့လည်း မဟုတ်ပါဝူး။ DNS servers configuring အတွတ် chapter2ကို ကြည့်ပါ။
default မှာ Routing And Remote Access Services NAT component သည် NAT errors တွေကို System event log မှာ log လုပ်ပါတယ်။ Server Manager မှ Diagnostics\_Event Viewer\_Windows Logs\_System မှာ ၄င်း logs တွေကို ကြည့်ရှုနိူ်င်ပါတယ်။ events အားလုံးမှာ SharedAccess_NAT source တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
Warnings တွေကို log လုပ်ဖို့၊ verbose logging လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် logging တစ်ခုလုံးကို disable လုပ်ဖို့NAT ကို configure လုပ်နိူင်တယ်။ NAT logging ကို configure လုပ်ဖို့Server Manager မှ Roles\_Network Policy And Access Services\_Routing And Remote Access\_Ipv4|NAT node မှာ right-click ပြီး Properties ရဲ့ General tab မှာ စိတ်ကြိုက် logging level သတ်မှတ်ပြီး OK ကို click ပါ။
Posted by P Kyaw Swa at 12:26 AM